Qubanaha » XOG: Musharaxiinta Maqaar Saarka Ah & Musharaxiinta Rasmiga Ah..[Olole Cusub]
XOG: Musharaxiinta Maqaar Saarka Ah & Musharaxiinta Rasmiga Ah..[Olole Cusub]
Kursiga Madaxweynaha Soomaaliya waxaa horey isugu soo sharaxay Musharaxiin badan oo qaarkood magac doon ay ahaayeen halka kuwa kalana ay daacad ka tahay Musharaxnimadooda ayna rajo ka qabaan in loo doorto Hogaanka dalka Soomaaliya.
Xarumaha ay ka socdaan Ololaha Musharaxiinta saameynta badan leh ayaa lagu arkayay musharaxiin kale oo horey u shaaciyay in ay u tartamayaan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya, Musharaxiintaasi ayaa qaarkood isku badalay in ay u ololeeyaan Musharaxiin kale si ay uga helaan dano siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Musharaxiinta hada isku badalay in ay ololeeyaan ayaa la arkayay iyaga oo Xildhibaano shukaaminaya kana dalbanaya in ay codkooda siiyaan Musharaxiinta ay la jaalka yihiin, waxa ayna Musharixiintan u muuqdaan kuwa si hoose u tanaasulay balse wali boorarkooda magaalada ku dhagan yihiin.
Dadka Siyaasada Falanqeeya ayaa aaminsan in Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynah Soomaaliya oo hada ka badan 20 Musharax ay kasoo hari doonaan ayna si rasmi ah isku diiwaan galin doonaan in kayar 10-Musharax.
Musharaxiinta saameynta leh lana saadaalinayo in midkood uu ku guuleesto Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa gaaraya ilaa 5-Musharax, waxaana wali adag in la saadaaliyo qofka rasmiga ah ee kusoo bixi doona Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya.